RegTech Africa na ihe ndị ọzọ gbasara gburugburu ebe obibi na-achọ € 2.7M iji mee ka ọ bụrụ azụmaahịa
Jikọọ DEEP Ecosystem Accelerator Alumni
RegTech Africa na 11 ndị ọzọ gburugburu ebe obibi bidoro n'ụwa niile sonyere na nso nso a na 1st Cohort nke DEEP ecosystem accelerator program.
DEEP Ecosystems bụ ihe mmalite mmalite teknụzụ zuru ụwa ọnụ nke nwere isi ụlọ ọrụ na Munich, Germany. Mmemme Accelerator na-enye ndụmọdụ, ọzụzụ na nkwado teknụzụ maka mmalite mkpụrụ ruo Series A, na-edozi ụfọdụ nnukwu nsogbu ụwa.
Ihe omume a na-akwado ma mmalite na ndị otu ntọala site n'ịkụzi ndị na-emepụta ihe na ọrụ azụmahịa, nkà na ụzụ na ndị ndú. Ọzọkwa, onye na-eme ngwa ngwa na-elekwasị anya na imekọ ihe ọnụ, na-ewu maka mmetụta zuru ụwa ọnụ.
N'ime ọnwa ole na ole gara aga, mmalite ndị a eritela uru site na mmemme ịkparịta ụka n'Ịntanet, nleba anya ụdị azụmahịa na atumatu mmepe azụmahịa nke mmemme osooso gburugburu ebe obibi DEEP.
N'ịbụ ndị gafere ọtụtụ ogige akpụkpọ ụkwụ dị elu nke ọma, yana ihe karịrị awa 500 nke ndụmọdụ na ọzụzụ azụmaahịa, mmalite ndị a eruola njedebe nke usoro na-eduga n'ọsọ ọsọ ka ukwuu iji buru ọrụ ha gaa n'ọkwa ọzọ.
Dị ka akụkụ nke mmemme Accelerator, a chọrọ ka ndị mmalite wepụta oghere nke ngwọta ha na DEEP Startup Ecosystem Conference, nke mere na October 18th, 2021 na Essen, Germany.
N'ịbụ ndị ezigbo ihe ịma aka dị ka ụkpụrụ ọhụrụ, ịkpa oke nwoke na nwanyị, nchekwa ego, echiche obodo na nnweta ego, ndị ọchụnta ego a na-achọ nkwado obodo siri ike karị.
Dị ka nzaghachi, mmegharị ọhụrụ a zuru ụwa ọnụ nke ndị na-ewu gburugburu ebe obibi na-achọ ịkwalite € 2.7mn n'ime afọ abụọ iji mejuputa ọrụ ọhụrụ dị iche iche nke ga-eme ka ọchịchị onye kwuo uche ya na ndị na-emepụta ihe.
"Ogbe DEEP na-ejikọta otu echiche, ngwá ọrụ siri ike nke data na-akwalite, yana ahụmahụ nke ndị na-ewu ụlọ na-amalite mmalite"Sebastián Díaz Mesa, Onyeisi nke ngwa ngwa na DEEP Ecosystems kwuru.”
"Anyị nwere obi ụtọ ịbụ akụkụ nke otu ìgwè mbụ nke DEEP Ecosystem Accelerator Programme na-elekwasị anya iji kpalite ọgbọ ọhụrụ nke ọzọ," Cyril Okoroigwe, CEO nke RegTech Africa kwuru.
“Ndị ọchụnta ego chọrọ nkwado obodo ka mma. Dịka nzaghachi, anyị malitere DEEP, mmegharị zuru ụwa ọnụ nke ndị na-ewu ụlọ obibi mmalite.
Ebumnuche anyị bụ ịkwalite € 30mn n'ime afọ 5 iji tinye ego n'ime ọrụ ọhụrụ 500 ọhụrụ, " Thomas Koesters, onye isi nchịkwa nke DEEP Ecosystems kwuru.
The DEEP Mmalite Ecosystem Conference bụ ọgbakọ zuru ụwa ọnụ nke ndị na-ewu ụlọ ihe ọhụrụ, ndị na-etinye ego, ndị ụlọ ọrụ, na ndị nnọchi anya gọọmentị na-achọ iwulite gburugburu ebe obibi siri ike nke nwere ike imeri ihe ịma aka kacha sie ike na obodo.